Ghọta Ohere | Martech Zone
N'ehihie a, m nwere nkwupụta na ụlọ ọrụ iwu mpaghara na Social Media. Ọ dị mma ịhụ otu nzukọ nwere atụmanya ikpughe ndị ọrụ ya na mgbasa ozi ọhụụ. Worldwa na-agbanwe agbanwe mana enwere ihe na-ezighi ezi n'ebe ahụ na mgbasa ozi ọha na eze bụ 'ihe ndị na-eto eto na-eme' ma ọ naghị eji ya akpọrọ ihe.
Industrylọ Ọrụ Akwụkwọ Akụkọ - Ohere Ndị Agbaghara
Afọ iri gara aga, arụrụ m ọrụ na akwụkwọ akụkọ ma lelee ha anya na-ele eBay na craigslist. Ha chere na ọ bụ maka geeks na ndị na-eto eto nakwa… ruo mgbe a na-agbanye ijeri dollar ijeri n'okpuru ha. N'ezie, ọ bụghị n'ezie yanked, ọ sere nwayọọ.
Ọtụtụ akwụkwọ akụkọ dere na uto nke uto nke teknụzụ ndị a, enweghị ntụkwasị obi na ọ ga-ewepụ ụlọ ọrụ nke aka ha. Ọtụtụ akwụkwọ akụkọ nwere mkpịsị ụkwụ ha na Industrylọ Ọrụ Ntanetị (InfiNet bụ otu ụlọ ọrụ nne na nna m na-arụ ọrụ) mana ha enweghị ike ịdọrọ ihe ahụ mgbe ha nwere ike itinye ego dị mkpa… ọbụlagodi mgbe ha maara na a ka nwere oge ịme ya. A dọtara usoro ụlọ ọrụ bara uru, ọ nweghịkwa onye njikwa ga-ewere 50% kwụsịrị n'akụkụ ụwa ọhụrụ a.
Akwụkwọ akụkọ nwere akụkọ mkpuchi na ego iji merie mfu ndị ahụ. Ọbụna ha nwere uru nke ụdị mpaghara a tụkwasịrị obi. Kama ime mgbanwe, ha tụrụ mkpịsị aka wee gbanwere otu njikwa na-aghọtaghị na nke na-aghọtaghị.
N'ime afọ iri m nọ na akwụkwọ akụkọ, anaghị m echeta otu nnọkọ ebe mmadụ batara ma tụlee teknụzụ ọhụụ wee jụọ ma ọ bụ tụlee etu ha ga-esi nwee ike ịkwalite arụmọrụ ma ọ bụ bulie uru.
Ọ bụ ihe na-enye ume ọhụrụ taa ịhụ ụlọ ọrụ mpaghara nwere echiche dị iche!
Burj Dubai - Ntọala siri ike
Otu n'ime slides na ihe ngosi m bụ nnukwu foto nke Burj Dubai, ụlọ na-ewu na United Arab Emirates nke ga-arị elu karịa ụlọ ndị ọzọ niile. A na-emecha ya iji mechaa site na njedebe nke afọ na-esote ma ugbu a atụmatụ ya nwere akụkọ 162.
Akụkọ 162 bụ atụmatụ kachasị ọhụrụ, agbanyeghị. A na-anụ asịrị na ihe mgbaru ọsọ agbanweela kemgbe ọtụtụ afọ, nke ụfọdụ n'ihi atụmatụ injinịa nwere ike ime nke gosipụtara ike nke ntọala na ogologo ụlọ ahụ. nwere ike kpọlite.
Otu anya n'ụlọ ahụ ma ị nwere ike ịmalite ịghọta ihe kpatara ya. Ntọala nke Burj Dubai bụ nnukwu ihe, na spire na-agbapụ ka ọ na-arịgo.
Social Media - Ntọala na Azụmaahịa
Social Media bụ ụlọ ọrụ gị ohere ịmalite iwu ntọala maka uto dị egwu n'afọ iri na-abịanụ. Mepụta akara ntanetị site na mgbasa ozi mmekọrịta na netwọk mmekọrịta na-atọ ntọala maka njikọta siri ike.
Dị ka weebụ, ịmalite taa ga-enye gị nnukwu ụgbụ iji weghara nnukwu azụmaahịa na afọ ndị na-abịanụ. Ọnọdụ ala na-agbanwe agbanwe. Nchọpụta ọchụchọ - ọbụlagodi Google - ga-efunahụ ụfọdụ ijide anyị otu anyị si agagharị na weebụ dịka Micro netwọk gaa n'ihu na-eto ma na-eto.
Lọ ọrụ mbụ gị na-emegharị na teknụzụ ndị a, ọ ga-akawanye mma mgbe ndụ gị dabere na ya. Firmlọ ọrụ m gwara okwu taa nwere ohere pụrụ iche. Ha nwere onyinye nke guzobere ikike ma na-ebute okwu ndị na-arịwanye elu dị ka okwu na-asọ mpi na iwu patent.
Ọ bụrụ na ndị ọrụ ha nọ na-ekerịta ahụmihe ndị ahụ n'ịntanetị taa na guzosie ike online ikike, ọkachasị obodo, ọ ga-enye ha netwọkụ iji bulie azụmaahịa echi. Ọ bụ oge na-atọ ụtọ maka ụlọ ọrụ a ọkachasị - ha bụ ụlọ ọrụ siri ike nwere ọgụgụ isi, buru ibu iji nwee mmetụta, mana obere iji tugharia na imeghari na oghere a ngwa ngwa.
Atụrụ m anya na ha ga-erite uru ma mata ohere ole na ole n’ime ha mere n’ime ime ụlọ ahụ!
Tags: AnalyticsChọọ Marketing
Mee 6, 2008 na 11: 53 AM
Na mkpokọta, ekwenyere m na ụkpụrụ nke ihe ị na-ekwu. Agbanyeghị, Social Media bụ ngalaba buru ibu nke na-eto kwa ụbọchị. Eleghị anya ị ga-eme nke a n'ime ngosi ahụ, mana ọ bara uru igbari Social Media na edemede ma gosipụta otu otu ụdị nwere ike isi tinye n'ọrụ nke ya.
Social Media bụ n'ụzọ bụ isi nke ịkekọrịta na olu. Yabụ ị nwere ndakpọ nke ihe ịchọrọ ịmekọrịta yana otu ịchọrọ ịkekọrịta ha. Echiche, ma ọ bụ ọkachamara ma ọ bụ nke onwe, enwere ike ịkekọrịta site n'ọtụtụ ụdị mgbasa ozi n'ịntanetị. Vidio nwekwara ihe njiri mara ya. Onu ogugu nke na-eto ngwa ngwa. Ya mere, n'eziokwu, na ọ dị mfe inwe mgbagwoju anya na ebe ị ga - enweta akara ozugbo ị 'tinyere aka' na Social Media.
Ma, ihe ị ga-eburu n'uche bụ ihe mmata nke akara gị, ihe ọmụma ma ọ bụ ngwaahịa ga-enweta ozugbo ejiri oge na-egwu ala ntakịrị n'ime Social Media. Dị ka ọmụmụ ndị na-adịbeghị anya na-egosi na n'agbanyeghị uto ndị ọrụ Internetntanetị, okporo ụzọ gaa na saịtị ndị kachasị elu site na otu afọ gara aga etobeghị n'otu ọnụego na ọbụlagodi n'ọnọdụ ụfọdụ. Nke a bụ n'ihi na ndị mmadụ na-eji Social Media na-ele anya na ezi mma, syndicated ọdịnaya.
Mee 6, 2008 na 6: 54 PM
Ihe ngosi a gara n’ihu ịkọwa ọdịiche dị iche iche dị iche iche na teknụzụ ejiri tinye na otu esi eme ihe ọ bụla - site na ịkparịta ụka n’etiti ịkparịta ụka n’ tontanet gaa na ịde blọgụ na twitter, wdg.
Ọtụtụ ihe ị ga-etinye n'ime otu post, n'ezie! Nke a were ihe dịka otu mkparịta ụka ogologo oge. 🙂
Ihe m chọrọ imesi ndị na-agụ akwụkwọ m ike bụ na ha ga-ebido taa …nweghị omume 'ichere ma hụ'. Ọ bụrụ na ịmeghị, ị nwere ike itinye ọdịnihu nke nzukọ gị n'ihe egwu.
Daalụ Michael! Na-enye azịza ndị nwere nghọta na-agbakwunye agba na isiokwu ahụ. Enwere m obi ụtọ na gị ma gbaa mmadụ niile ume ka ị gaa na blog gị!
Mee 6, 2008 na 3: 09 PM
Arụrụ m ọrụ na Boston Globe n'oge etiti 90. Ha bụ otu n'ime ndị mbụ na-amataghị mmetụta nke weebụ, kama iji ya. http://www.boston.com
Mee 6, 2008 na 6: 58 PM
Ndewo Jayce! Ee, Boston Globe bụ, n'eziokwu, otu n'ime ndị ahịa m na ngwụsị afọ 90 ma rụọ ezigbo ọrụ na itinye usoro azụmaahịa nchekwa data. Ọbụna ha jiri ụfọdụ ngwaọrụ nyocha njigide nke m (na ndị ọzọ) mepụtara.
Akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ, dị ka Toronto Globe and Mail, Houston Chronicle, San Francisco Chronicle, Chicago Suburban Newspapers, na Detroit Press tinyere obere teknụzụ ọhụrụ. Ọ masịrị m iso onye ọ bụla n'ime ha na-arụ ọrụ nke ukwuu!
Mee 6, 2008 na 3: 37 PM
Kedu ihe kpatara azụmaahịa ndị a dị ugbu a anaghị agbanwe agbanwe? N'ihi na nnukwu inertia na-aga n'ihu n'otu ụzọ ahụ. Christensen kọwara ya nke ọma na Ọhụụ nke Onye Ọrụ Ọhụrụ.
Mee 6, 2008 na 7: 01 PM
Ihe atụ zuru oke. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụ m 'olee mgbe anyị ga-eme' na mmepe ngwaahịa anyị. Anaghị m agwa ha ọ bụrụhaala na anyị na-azụ ahịa! Innovation choro onye ndu nke ghotara na ulo oru gha aghaghi itinye ego na ihe ohuru, ma obu ha gha laa n’iyi. O nwere ike buru otu narị afọ ma ọbụ karịa… mana ha ka ga-ala n’iyi.
Mee 10, 2008 na 8: 35 AM
Ọ bụrụ n'ịchọrọ nnukwu akwụkwọ ọcha na soshal midia gafere ndị ahịa gị, lelee nke a site na smashLAB na Vancouver: